Recessed nitaingina Aluminum Profile
Mombamomba ny alim-baravarana / valindrihana / gorodona
Niainga etỳ ambonin'ny Aluminum Profile
Safo-drano Light SMD
Safo-drano Light COB
Momba an'i RISTAR
Fampidirana ny fanaparitahana hafanana LED
Amin'ny fananganana eo an-toerana, ny androm-piainan'ny jiro LED sy ny vokatry ny fampiasana azy dia mifandray akaiky amin'ny fanaparitahana ny hafanana. Raha tsy tsara ny fiparitahan'ny hafanana amin'ny jiro LED dia hisy fiantraikany mivantana amin'ny ain'ny serivisy ny vokatra sy ny vokan'ny fampiharana. Noho izany, ny anjara asan'ny radiator LED dia manan-danja manokana. Amin'ny ankapobeny, ny firafitry ny jiro LED dia misy LED, firafitry ny fanaparitahana hafanana, mpamily ary solomaso. Ny ampahany lehibe indrindra amin'ny firafitry ny fanaparitahana hafanana dia ny filentehan'ny hafanana LED. Ireto ambany ireto dia hampahafantarinay amin'ny antsipiriany ny fomba famafana hafanana marobe amin'ireo taratra LED.
Fampidirana ny fomba fanaparitahana hafanana mahazatra an'ny radiatera LED:
1. Fill LED heat-aluminium fins heat sink
Ny vombony manome taratra Aluminium no fomba fampiasa matetika amin'ny fanaparitahana hafanana ho an'ny radiator LED, indrindra hampitomboana ny velaran'ny faritra misy ny hafanana amin'ny alàlan'ny vombony manaparitaka aluminium.
2. Tavoahangy plastika fitarihana hafanana mitarika hafanana
Ny akorany vita amin'ny plastika conductive dia manolo ny firaka alimina amin'ny alim-baravarankely LED sy ny plastika fanaparitahana hafanana hanatsarana ny fahaizan'ny taratra hafanana hahatratra ny tanjon'ny fanaparitahana ny hafanana.
3. Fitsaboana taratra hafanana LED eny ambonin'ny rano
Ny fitsaboana amin'ny taratra ambonimbony dia ny fametrahana loko mandoko hafanana taratra ambonin'ny tany amin'ny jiro LED mba handrehitra hafanana manalavitra ny tampon'ny tranon'ny jiro mba hahatratrarana ny tanjon'ny fanaparitahana ny hafanana.
4. Taratra LED — mekanika misy tsiranoka amin'ny rivotra
Mampiasa mekanika ny tsiranoka amin'ny rivotra ny endrik'ilay trano fanaovan-jiro LED hamoronana rivotra mifangaro hanatratrarana ny tanjon'ny fanaparitahana ny hafanana. Ity ihany koa no fomba fanatsarana hafanana avo lenta farany ambany.
Ireto voalaza etsy ambony ireto no fomba fampielezana hafanana 6 lehibe iraisan'ny radiatera LED.
Famintinana ny sasany amin'ireo olan'ny fanaparitahana ny hafanana LED, ny fomba tsara indrindra hanaparitahana ny hafanan'ny jiro tarihina, ny olana amin'ny famafana ny jiro tarihin'ny hazavana, inona no hitranga raha tsy tsara ny fanaparitahana ny hafanana amin'ny vakana jiro tarihina, ny hafanana fanaparitahana pad ny jiro bead namboarina mila insulated, ny fomba dissipation hafanana ny jiro tarihiny, ary ny faritra dissipation hafanana ny notarika jiro vakana, namboarina namboarina jiro bead fanaparitahana, nitondra jiro bead fanaparitahana silipo menaka, 1w namboarina jiro bead mila manaparitaka hafanana, nitondra jiro bika hafanana fanaparitahana famolavolana, nitondra jiro bead fanaparitahana hafanana 1w ohatrinona faritra, nitondra jiro bead dissipation aluminium takelaka mari-pana, nitondra jiro bead hafanana fanaparitahana kajy Fomba sy raikipohy, LED jiro vakana ny famafana ny hafanana dia lehibe, ny famafana ny jiro LED dia manaparitaka ny hafanana manokana, ny mari-pana sy ny fotoana fanamoriana jiro.
Fotoana fandefasana: Sep-24-2021
Office: Doguskent Cadessi Tas Apt.10 / 6 Maltepe / Istanbul / Torkia
Torkia Factory: Sorkun Koyu, Yeni Mevkii No.73, Dörtdivan / Bolu / vorontsiloza
Famakafakana ny haavon'ny tsena sy ny fampandrosoana...
Ny antontan'isa dia mampiseho fa miaraka amin'ny fampiharana ny foto-kevitra momba ny fiarovana ny angovo eran-tany sy ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fanohanan'ny politikan'ny indostria any amin'ny firenena samihafa, ny tsenan'ny jiro LED eran-tany dia nitazona ...
Miresaka momba ny jiro ara-pahasalamana sy ny maitso...
Ny dikan-teny feno amin'ny jiro maitso dia misy tondro efatra amin'ny fahombiazana ambony & fitsitsiana angovo, fiarovana ny tontolo iainana, fiarovana ary fampiononana, izay tena ilaina. Ny fahaiza-manao avo lenta sy ny fitsitsiana angovo dia midika...
Tandremo ny fametrahana ny LED strip...
6. Tandremo tsara ny ety ambonin'ny tany rehefa mametraka Alohan'ny fametrahana ny jiro strip, azafady tazony madio sy tsy misy vovoka na loto ny ambonin'ny fametrahana, mba tsy hisy fiantraikany amin'ny fikitihana ny jiro...
1. Fandrarana ny asa mivantana Ny jiron'ny jiro LED dia ny vakana jiro LED mipetaka amin'ny solaitrabe malefaka miaraka amin'ny teknolojia fanodinana manokana. Aorian'ny fametrahana ny vokatra dia hamelona sy hazavaina, ary ...
Teknika sy fomba fitsitsiana angovo ho an'ny...
Ny "Lamp" dia tsy vitan'ny hoe jiro ihany, fa manana ny asany amin'ny haingo sy fahatsaran-tarehy. Na izany aza, amin'ny tranga tsy ampy hery dia tokony hohatsaraina ny fahombiazan'ny jiro ary ny hazavana ...
Ny jiro valin-drihana fotsiny dia tsy ampy ho an'ny ...
Matory ny ampahatelon’ny fiainan’ny olona iray, ary tsy maintsy mijanona ela kokoa ao amin’ny efitra fatoriana isika. Ho an'ny toerana manan-danja toy izany dia mila mandravaka azy araka izay azo atao isika ary manao azy io ho toerana tsara indrindra hialana sasatra sy e...
Loko mari-pana amin'ny hazavana LED
Ny hafanan'ny lokon'ny loharanon-jiro Ny olona dia mampiasa ny mari-pana tanteraka amin'ny radiatera feno mitovy na akaiky ny hafanan'ny lokon'ny loharanon-jiro mba hamaritana ny latabatra lokon'ny loharanon-jiro (ny ...
Aza mividy jiro LED amin'ny ...
LED Street Light dia mila mirehitra isan'andro sy mandritra ny fotoana maharitra. Raha tsy ambony ny fepetra takian'ny kalitao dia tsy ny olona ihany no tsy afa-po, fa asa sarotra ihany koa ny fitantanana sy ny fikojakojana ny jiro an-dalambe....
Ahoana no hitsarana ny kalitaon'ny LED ultra-thi ...
Soso-kevitra farany: Misy marika marobe jiro takelaka manify LED eny an-tsena. Ahoana no ahafantarantsika hoe iza no manana kalitao tsara kokoa? Ny jiro ultra-manify LED dia azo lazaina ho solontenan'ny Led Energy-save la ...
Inona avy ireo toetra mampiavaka ny ...
Raha ampitahaina amin'ny karazana jiro hafa, ny vokatra jiro ara-barotra dia samy manana ny mampiavaka azy sy ny mampiavaka azy. Ny jiro varotra varotra dia ampiasaina amin'ny sehatra ara-barotra. Raha ampitahaina amin'ny karazana jiro hafa, ...
Amin'ny fananganana eo an-toerana, ny androm-piainan'ny jiro LED sy ny vokatry ny fampiasana azy dia mifandray akaiky amin'ny fanaparitahana ny hafanana. Raha tsy tsara ny fiparitahan'ny hafanana amin'ny jiro LED dia hisy fiantraikany mivantana ...
Nitondra Cob Safo-drano Light, Led Tri-Proof Light Fixt , Nitondra Floodlight 30w, Hitany Solar Rechargeable Safo-drano Light, Ceiling Led Panel Light , Philips 3030 Hitany Safo-drano Light,